Izindaba - Yini Oyaziyo Nge-Electric Drill
I-Electric drill ngumshini wokubhola osebenzisa ugesi njengamandla. Kungumkhiqizo ojwayelekile kumathuluzi wamandla nomkhiqizo wethuluzi lamandla odingeka kakhulu.
Ukucaciswa okuyinhloko kokubholwa kukagesi kungu-4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 32, 38, 49mm, njll. Izinombolo zibhekise kububanzi obukhulu bento yokubhola eboshwe ensimbi ngamandla we-tensile 390N / mm2. Ububanzi bokubhola obukhulu bezinsimbi ezingenayo i-ayoni, amapulasitiki nezinye izinto zingaba 30-50% enkulu kunezincazelo zokuqala.
Ukwahlukanisa & Umehluko
Ama-drill kagesi angahlukaniswa ngezigaba ezi-3: ukubhoboza ngesandla kagesi, ukubamba umthelela, nokubhoboza kwesando
1. Isandla sokuprakthiza kagesi:Amandla amancane kunawo wonke, futhi ubukhulu bokusetshenziswa bukhawulelwe ekubhodleleni izinkuni nanjenge-screwdriver kagesi. Ezinye izinto zokuzivivinya zikagesi zingashintshwa zenziwe amathuluzi akhethekile ngokwenhloso. Kunemisebenzi eminingi namamodeli.
2.I-Impact drill:Indlela yokusebenza yomthelela we-drill yomthelela inezinhlobo ezimbili: uhlobo lwenja yezinja nohlobo lwebhola. Ibhola-uhlobo umthelela sokuprakthiza yakhiwa ipuleti ezithathekayo, ipuleti fixed, steel ball nokunye. Ipuleti elihambayo lixhunywe kushaft enkulu ngentambo, futhi linamabhola wensimbi ayi-12; ipuleti elihleliwe ligxunyekwe ekheyini ngezikhonkwane futhi linamabhola ensimbi ama-4. Ngaphansi kwesenzo sokufakwa, amabhola wensimbi ayi-12 agingqika emabhola wensimbi ama-4. I-cemented carbide drill bit ikhiqiza ukunyakaza komthelela ojikelezayo, ongabhoboza izimbobo ezintweni ezi-brittle ezifana nezitini, amabhlogo, nokhonkolo. Susa izinzipho, yenza ipuleti elingaguquki nepuleti lomlandeli lizungeze ndawonye ngaphandle komthelela, futhi kungasetshenziswa njengebhodi ejwayelekile kagesi.
3. Isando sokuprakthiza (isando sikagesi): Iyakwazi ukubhoboza izimbobo ezinhlobonhlobo zezinto ezilukhuni futhi inokusetshenziswa okubanzi kakhulu.
Amanani alezi zinhlobo ezintathu zokuzivivinya kagesi ahlelwe kusuka phansi kuya phezulu, futhi imisebenzi inyuka ngokufanele. Ukukhethwa kudinga ukuhlanganiswa nobubanzi nezidingo zabo.
Umehluko phakathi kwe-drill kagesi, i-impact drill, i-hammer drill nokukhetha kagesi.
Umshini wesandla kagesi umane uthembele emotweni ukushayela igiya lokudlulisa ukukhuphula amandla ebhola lokubhola, ukuze ibhilidi likwazi ukuklwebha ngensimbi, ngokhuni nangezinye izinto.
Lapho ukubhola komthelela kusebenza, kunezindlela ezimbili zokulungisa i-knob ku-chuck drill, i-drill eguquguqukayo kanye ne-drill yomthelela. Kepha umshini wokuprinta umthelela usebenzisa amagiya asemgodini wangaphakathi ukuze agxume ukufeza umthelela womthelela, futhi amandla okuthelela angaphansi kakhulu kwesando sikagesi. Ingabuye ibhole ukhonkolo oqinisiwe, kepha umphumela awumuhle.
Ama-hammer (izando zikagesi) ahlukile. Basebenzisa imoto engezansi ukushayela amasethi amabili ezakhiwo zamagiya. Isethi eyodwa iyabona ukubhola kanti enye isetha i-piston, efana nokushaywa yi-hydraulic yenjini, okwenza amandla amakhulu omthelela. umphumela. Amandla angahlukanisa amatshe ahlukanise negolide.
Ipiki kagesi ukuvumela imoto ukuthi ishayele indunduma eguqukayo ukuze isebenze ngemodi yokubhampa, ukuze ipiki libe nomthelela wokugcoba phansi. I-hydraulic pump pick isebenzisa ingcindezi yegesi edluliswa yi-compressor yomoya ukushayela isando sepompo kukhethi kagesi ukubuyela emuva naphambili, ngaleyo ndlela kuveze umphumela wentshisi yepiki eshaya phansi, kepha ikhethi kagesi kuphela amashizolo nekhanda ayiphenduki.
Sekukonke, imishini yokuzivivinya kagesi ikwazi ukubhola kuphela, futhi izivivinyo zokushaya ngamandla nazo zingaba nomthelela omncane wokushaya. Isando sokuprakthiza singabhora futhi sinyuse kakhulu, ngenkathi ipiki kagesi ingeyokuncibilikisa kuphela futhi ayikwazi ukubhola.